यो वर्ष सबैभन्दा धेरै पर्यटक पुगेका विश्वका २० शहरहरु – Puleso
By:puleso Published Date: सोमवार, पुस ३, २०७४
२. लण्डन, बेलायतः विभिन्न सम्पदाहरु, भू-दृश्य, थिएटर, रात्री जीवन तथा ग्यालरीहरुका लागि
र्चित बेलायती राजधानी लण्डनमा यस वर्ष २ करोड विदेशी पर्यटक पुगेका छन् । म्याडम टुसाड्स संग्राहलय, बकिंघम दरबार, बिग बेन तथा वेस्टमिनिस्टर भवन लगायतका चर्चित पर्यटकीय स्थल लण्डनमा छन् ।
२०. प्राग, चेक गणतन्त्रः सयौँ वर्षदेखि सहरको चोकमा रहेको खगोलीय घडी प्रागको मूख्य पर्यटकीय गन्तव्य हो । प्रागमा यस वर्ष ६४ लाख विदेशी पर्यटक पुगेका छन् ।(अनलाइन खबर)